सुत्केरी भन्दा गर्भपतन गराउने धेरै — Bhaktapurpost.com
सुत्केरी भन्दा गर्भपतन गराउने धेरै
पर्वतमा गत वर्ष सुत्केरी भन्दा गर्भपतन गराउने धेरै रहेको छ । गएको वर्ष मात्र ९७२ महिलाले गर्भपतन गराएका छन् ।
सुत्केरी हुने ९०१ जना रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका तथ्याङ्क अधिकृत प्रवीण भण्डारीले बताएका छन् । उनले तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदा सुत्केरी हुनेभन्दा धेरै संख्यामा गर्भपतन गराउने देखिएको जानकारी दिए ।
गर्भपतन गर्ने महिलाहरुले जिल्ला अस्पताललगायत २६ स्वास्थ्य संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्वीकृति प्रप्ता गरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सेवा लिएका हुन् । गर्भपतन परिवार नियोजनको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
‘परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नभन्दा गर्भपतन गर्न सजिलो मान्ने गरेको छ’, पर्वत अस्पतालका प्रमुख डा. शिशिर देवकोटा भन्छन्, ‘ यसले महिलाको स्वास्थमा खतरा निम्त्याउँछ ।’ उनले अस्थायी परिवार नियोजनका साधन कमैले मात्र प्रयोग गरेको बताए । राष्ट्रियस्तरमा परिवार नियोजनको साधान प्रयोगदर ४२ दशमलव ७ प्रतिशत भएतापनि पर्वतमा मात्रै अस्थायी साधनको प्रयोगदर ३१ प्रतिशत रहेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीक अनुसार अस्थायी परिवार नियोजनका साधन भए पनि प्रयोगकर्ताहरु झण्झट मान्ने गर्छन् । जिल्लाकै सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिकाका ४९४ महिलाले गत वर्ष गर्भपतन गरेका छन् ।
डा. देवकोटाले धेरैपटक गर्भपतन गराउँदा महिलामा पाठेघर कमजोर हुने, गर्भ राख्न चाहँदा पनि गर्भपतन हुने र भविष्यमा बाँझोपनसमेत हुने खतरा हुने बताए । महिलालाई सकेसम्म गर्भनिरोधक अस्थायी साधानको प्रयोग गर्न डा. देवकोटाले सुझाएका छन् ।